Umqeqeshi unethemba lokuthi iPirates isifundile isifundo sayo kwiLeopards ngokungalishayi kuqala igoli - Impempe
Umqeqeshi unethemba lokuthi iPirates isifundile isifundo sayo kwiLeopards ngokungalishayi kuqala igoli
January 18, 2021 January 22, 2021 Impempe.com
Usale enemizwa ephikisanayo ngendlela iqembu lakhe elidlale ngayo ngesikhathi lihlulwa yiBlack Leopards ngo 2-0 emdlalweni weDStv Premiership umqeqeshi we-Orlando Pirates, uJosef Zinnbauer ngeSonto ntambama, eThohoyandou Stadium.
Okushiye le nsizwa yaseGermany ingenelisekile yindlela abavele baphelelwa ngayo amaqhinga okubuya ngemuva kokulandela ngamagoli amabili. Ukhala ngokuthi bebengasheshi ngendlela ayijwayele uma bebheke epalini sebethole ibhola.
Nokho okumnike ithemba lokuthi kuningi okuhle abasazokuhlomula wukuthi baqhubekile nokulwa ikakhulukazi ngesiwombe sesibili lapho bese bejikijela noma yini abayitholayo kwiLeopards.
IPirates izithole seyilandela ngemuva ngamagoli amabili esiwombeni sokuqala ngemuva kokuthi u-Innocent Maela eshaye igoli epalini langakubo kwase kuthi uRoderick Kabwe washaya elesibili kungakapheli nemizuzu engu-40 umdlalo uqalile.
Ngemuva kwalokho, ikakhulukazi ngesiwombe sesibili iBhakabhaka lizame konke ukubuya kodwa kwasho khona ukuthi iLeopards isinqumile ukuthi amaphuzu azosala wonke eVenda.
“Bekunzima. Sibaphe igoli kwabe sibasizile ngoba ngemuva kwalokho bese belwela ukufa nokuphila. Bayawalwela amaphuzu amathathu ikakhulukazi uma bedlala neqembu abaziyo ukuthi ngeke basolwe muntu uma libashayile,” kuchaza uZinnbauer.
Uthe kusukela ekuqaleni abazange bayikhombise iLidoda Duvha ukuthi bona bayiqembu elisembangweni wesicoco kanti yona ilwa nokuvika izembe.
“Bekufana nokuthi asikho enkundleni ikakhulukazi ngesiwombe sokuqala. Sidlalile okungatheni kodwa bekungenele ukuthi singawina umdlalo. Uma uzobhekana neqembu elisezembeni kumele usheshe ulikhombise ukuthi awuzile ukuzoganga. Kumele usheshe ubathumelele umlayezo wokuthi ngeke nithole lutho namuhla.
“Kodwa besingasheshi ngendlela efanele ikakhulukazi ngemuva kokuthola ibhola sekumele sihlasele. Benginomuzwa wokuthi sizozidlela amahlanga lana kodwa lutho, akuhambanga kanjalo. Angazi kwenzekeni ngemuva kokungenelwa amagoli kodwa mhlawumbe kumele sincome nembangi ukuthi ikwazile ukusivimba singabuyi. Ngithikamezekile emoyeni ngoba besinethuba lokusondela emaqenjini aphambili kunathi,” kusho lo mqeqeshi.
IPirates isizilungiselela ukubhekana neLamontville Golden Arrows engakahlulwa kule sizini emidlalweni yeligi, kanti isendaweni yesine kwi-log, futhi ishiya iBhakabhaka ngephuzu elilodwa. UZinnbauer uthe kumele nakanjani bawaqoqe ephelele amaphuzu kulo mdlalo ose-Orlando Stadium ngoLwesithathu ngo 5 ntambama.
“Kumele singavumi umphumela weLeopards usehlise isithunzi nokuzethemba. Sinomdlalo omkhulu ngoLwesithathu neqembu elisendaweni efana neyethu kwiligi. Kumele siqoqe amaphuzu amathathu,” usho kanje.
Into athe ibalulekile nokumele bayenze uma sebedlala naBafana Bes’thende ukuthi basheshe bawashaye amagoli ukuzehlisela ingcindezi.
“Kumele usheshe ulishaye igoli ngoba lokho kwenza izinto zibe lula kuwe. Uma umdlalo uqhubeka uya phambili ungakalishayi igoli ingcindezi iyakhula umzuzu nomzuzu umdlalo uqhubeka,” kuchaza uZinnbauer.
Previous Previous post: UBenni akajabulile neze ngamathuba abawayekile bebhekene neMaritzburg
Next Next post: UMazinyo ujabule ngokubuya nephuzu bebhekene noSuthu